I-EP1 Electric Window Operator
I-EP1 yinhle, isakhiwo esiqinile, ukumelana okuncane kokudluliswa, imisindo embalwa nokufakwa okulula, okuwumkhiqizo wokuvula iwindi osezingeni eliphakeme kakhulu emakethe yasekhaya njengamanje. Ingafakelwa isilawuli kude, ukulawula intuthu, ukulawula izinga lokushisa, ukulawula umoya, ukulawula imvula kanye nenye idivaysi yokuzwa ukulawula ngokuzenzakalela ukuvulwa nokuvalwa kwebhande. Kwamukelwa kabanzi ukuvulwa nokuvalwa kwesibhakabhaka esigcwele phezulu nesibhakabhaka esivundlile esiphakathi nendawo sokuphuma kwendawo yokuphumula, isakhiwo sefektri yezimboni, isakhiwo somphakathi futhi samukelwa namanye amawindi wokukhanyisa anezindlela ezifanayo zokuvula nokuvala.
1, ukuxazulula inkinga yokugqwala ngenxa yokugcina ubunzima ekuphakameni okuphezulu, i-aluminium magnesium alloy casting isetshenziselwa ukufaka indawo yensimbi njengokuqukethwe okuyinhloko kokumbozwa kwangaphandle kwesinciphisi sejubane.
2, Ukuhlanganiswa kwemishini nogesi kuqashwe ukuqeda izintambo ezingcolile. Kuyinto engathandeki ukufaka noma ukunakekela. Ngaphezu kwalokho, kudala inkathazo kalula ngoba izokonga ngemuva kokuchayeka isikhathi eside esimweni sezulu esibi.
3, EP1 ilawulwa yisifunda esihlanganisiwe, esinikezwe umoya owengeziwe, imvula, izinga lokushisa, isikhombimsebenzisi sokulawula intuthu nokuhlangana komlilo. Umsebenzi wokulawulwa okuphakathi noma kwasendaweni nakho kuyabandakanyeka.
4, Ibhlokhi yokusetha ithubhu lokushayela kanye nendawo yokushintsha iyunithi inikezwe ukuthwala okugudlukayo ukwandisa ukwakheka kokudlulisela ekubusheleleni kokudonsana komsindo nangomsindo ophansi.
5, EP1 ilawulwa manje ukukhanya.
3. Isisekelo Sokwakheka
Lapho kuvulwa iwindi, umphathi ubanjwa yimoto enesigaba ezintathu (imodeli ADF7134). Umphini wokukhipha we-host ushayela ithubhu yokudlulisa nge-coupling band bese ithubhu yokudlulisa ishayela igiya kanye ne-rack ekushintsheni ukubona ukuvulwa nokuvalwa kwewindi.
1 amandla (V) 380
2 imvamisa (HZ) 50
3 amandla (KW) 0.75
4 isivinini ukujikeleza (r / iminithi) 1400
5 isivinini sokushintsha (mm / min) 2000
6 umkhawulo wokulayisha umoya (N / m2) 550
7 Ukuvikelwa Degree IP65
5.Ukukhethwa Kokuvula Iwindi
1) Ubudlelwano obuphakathi kokuphakama kwezingilazi eziphanyekwe phezulu nezingqimba ezigxilwe phakathi nendawo nobude bendawo yokubeka kanye nomkhawulo wokuvula kuboniswa kuthebula elilandelayo:
Ukuphakama okuyisisekelo kwewindi (mm) Incazelo yokubeka (mm) Ubude bemikhawulo yokuvula nokuvala (m) Khawulela i-engeli yokuvula nokuvala
2) I-skylight yensimbi (iwindi eliseceleni) elinokuphakama kwe-1800, 2400 ne-3000 inezinhlobo ezimbili zokuvula umugqa ophindwe kabili:
a. Isivuli sewindi sisethelwe umugqa ngamunye wokukhanya kwesibani sensimbi okulengiswe phezulu. Lapho ukwakheka kokufakwa kwewindows opener kungahambisani nesimo sesayithi, izinkinga zokufaka kufanele zixazululwe ngumenzi esizeni.
b. Kusethwe isethi eyodwa kuphela yokuvula iwindi emugqeni ophezulu wokukhanya kwesibani sensimbi okulengiswe phezulu kanti ukukhanya kwesibani sangaphandle komugqa kuvula ngomugqa ophezulu ngasikhathi sinye ngenduku yokuxhumanisa. Kusethwe isethi yokuvula iwindi kuphela emugqeni ongezansi wesibhakabhaka esikhanyiswe ngensimbi esesikhungweni futhi isibani sokukhanya kwesibani esingenhla sivuleka ngomugqa ongezansi ngasikhathi sinye ngenduku yokuxhumanisa, kepha ubude bomkhawulo wokuvulwa buzoncishiswa.